Professional Golf Club များစက်ရုံ၊ ဂေါက်သီးကလပ်အသင်းများ ၀ ယ်ယူခြင်း၊ ကျောက်စိမ်း
ဂေါက်ဂေါက်ကွင်း Fairway သစ်သား
ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်း၊ ဂေါက်ကလပ်များအတွက် OEM / ODM SERVICE
ဂေါ့ဖ်ထုတ်လုပ်သူနှစ် ၂၀ ကျော်
Golf Set၊ Golf Head နှင့်အခြား Golf Equipment များအတွက် OEM ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂေါက်သီးရိုက်စက်ရုံတစ်ခုအနေဖြင့် Jasde သည်အပြိုင်အဆိုင်စက်ရုံစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက္ကားဂေါက်သီးကလပ်နှင့်ထုံးစံအတိုင်းဂေါက်သီးများကိုပေးသည်။ Jasde သည်ဂေါက်ကလပ်၏အကောင်းဆုံးသောနေရာတွင်လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်း၊ အရည်အသွေးကောင်းခြင်း၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါထုတ်ကုန်များကိုစစ်ဆေးရန်နှင့် Jasde ဂေါက်သီးကလပ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များရရှိရန်ကြိုဆိုပါသည်။
စိတ်ကြိုက် raterbow Wood သည်ဂေါက်သီးရိုက်သည့်ယာဉ်မောင်း Faitanward သစ်သားနှင့်မျိုးစပ်ထုတ်လုပ်သူများကိုတရုတ်မှပြုလုပ်သည်
Rainbow 2PC Premium Titanium ကားမောင်းသူ CG အလေး2ခုကိုအလေးမမြန်နှုန်းမြင့်မားသော M.O.i.i.i. ယုံကြည်မှုအားဖြင့် USGA မှ0င်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။Jasde စိတ်ကြိုက် Risebow Wood Browners မှထုတ်လုပ်သူများ,
စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော Official CNC MILTED PODTER ထုတ်လုပ်သူများတရုတ်မှ
Xenos စီးရီး Putter သည်ဖြုတ်တပ်နိုင်သောဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခု၏လက္ခဏာတစ်ခုပြုလုပ်သည်။ တစ် ဦး တည်းသောပန်းကန်သည် Light Aluminum စာရွက်ကခေါင်းအိတ်လုံးအလေးချိန်တစ်ခုလုံးကိုလျှော့ချသည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တစ် ဦး တည်းသောပန်းကန်အေးမြဒီဇိုင်း။ တစ် ဦး တည်းသောပန်းကန်ပေါ်ရှိ 4Wheights သည်ပစ္စည်းများကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပစ္စည်းများကို0င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ပစ္စည်းများကိုအလေးထားနိုင်ရန်အတွက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Custom Options များပါ0င်သည်။ ခေါင်းအရောင်, လိုဂို, ချုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အရှည်Jasde သည် Official CNC MILTED PODTER PODTER ထုတ်လုပ်သူများ,
လက်ကားသံသံ #7တစ်ခုတည်း Leng သံဂေါက်သီးကလပ်သည်အလွန်ကောင်းသောစျေးနှုန်း - Jasde ဂေါက်သီးဖြင့် sings sing sing
တစ်ကိုယ်ရေဝက်ဂေါက်သီးသံအစုံအားလုံးသည်အရှည် 4,5,6,6,7 "တွင် 37. 25" ThreTset တွင် 7,5, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, သူတို့ကိုထိတွေ့ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီးခွင့်လွှတ်တတ်သည်။Jasde လက်ကားလက်ဖဝါးသံ 17 singlege-Jasde, 100% အရည်အသွေးစစ် Wedrently-Jasde အတွက်အရေးပါသောကိစ္စရပ်များ
လက်ကား CNC ကြိတ်ဖြည့်ထားသောမျက်နှာသပ်ကလပ်သည်ဂေါက်သီးပန်းကန် -jasde-Jasde ဂေါက်သီးဂေါက်သီးဂေါက်သီးနှင့်အတူဂေါက်သီးဖြင့်ထိုးထားသည်
ဂန္ထဝင်မြင့်မားသောပိုလန် finish နှင့်ဂန္ထဝင်ဓါးပုံအရောင်ရွေးချယ်စရာများ - အနက်ရောင်, ရွှေ, နှင်းဆီရွှေ, အပြာရောင်,PIN ကိုအနီးကပ်သင့်ဘောလုံးကိုရယူရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဂေါက်သီးCNC ကြိတ်ဖြည့်သည်။Jasde Melegicprice-Jasde နှင့်အတူ 6500 စတုရန်းမီတာဂေါက်ကလပ်စက်ရုံများနှင့်အတူဂျက်လက္ကားသံကြိုးပဲွCustom Options များပါ0င်သည်။ ခေါင်းအရောင်,
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂေါက်သီးကလပ်အသင်းများအတွက်ဂေါက်သီးစက်ရုံသာမကစိတ်ကြိုက်ဂေါက်သီးစက်များသာမကငါတို့နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကောင်းတစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်။ Jasde တွင်သင့်တွင်ဂေါက်သီးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်အခြားမည်သည့်နေရာမှမရရှိနိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းများရှိသည်။
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် GOLF သာမက ၀ န်ဆောင်မှုကိုလည်းပါပေးပါသည်။
&: D စွမ်းရည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားသောဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုပေးနိုင်သည်။ ဂတ်စ်ကလပ်တွင်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုအခွံမာသီးနှင့်သော့ခလောက်ဖြင့်သရုပ်ဖော်ရန် Jasde ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။ Jasde ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်စိတ်ဝင်စားသင့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
Hybrid Wedge-Jasde ဂေါက်သီးကလပ်စိတ်ကြိုက်ဥပမာ
ဂေါက်သီးဖြည့်စွက်ခြင်း, ယာဉ်မောင်းများ, သံများ,င်းများ,Hybrid Wedge-Jasde ဂေါက်ကွင်းစိတ်ကြိုက်ကလပ်သို့မိတ်ဆက်
JASDE တွင်သင့်တွင်ကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ယူရန်နှင့်အခြားမည်သည့်နေရာမှမရရှိနိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းရန်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်။
Xiamen Jasde Sports သည်ဂေါက်သီးရိုက်၊ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောဂေါက်သီးရိုက်စက်ရုံဖြစ်ပြီးဂေါက်သီးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း Xiamen တွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM၊ ODM ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ် (Koala, Mazel) ထုတ်ကုန်များကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိဖောက်သည်များအားပေးပါသည်။ ဂေါက်သီးယာဉ်မောင်းများ၊ တောအုပ်များ၊ သံတိုင်များ၊